Wada-hawlgalayaasha Talyaanigu waxay Xog socdaal oo cusub ka helayaan Seychelles
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Wada-hawlgalayaasha Talyaanigu waxay Xog socdaal oo cusub ka helayaan Seychelles
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Seychelles waxay soo dhawaysay dadka safarka ah ee ka imanaya Talyaaniga
Ku haysashada Seychelles maskaxda sare ee ganacsiga safarka Talyaaniga, Agaasimaha Guud ee Dalxiiska Seychelles ee Suuqgeynta Goobta, Bernadette Willemin, waxay martigelisay qaar ka mid ah la-hawlgalayaasha muhiimka ah ee goobta ugu muhiimsan ee Rome munaasabad qado ah oo la qabtay Noofambar 18, 2021.
Dib u midaynta wakiillo ka socda ganacsiga oo ay ku jiraan hawl-wadeennada dalxiiska, la-hawlgalayaasha diyaaradaha iyo qaar ka mid ah xubnaha saxaafadda gaarka ah, Mrs. Willemin iyo Dalxiiska Seychelles Wakiilka Talyaaniga, Danielle Di Gianvito, ayaa la wadaagay macluumaadka la cusboonaysiiyay ee ku saabsan halka loo socdo si loogu dhiirrigeliyo safarka Seychelles ka dib markii meesha laga saaray tallaabooyin xaddidan oo loogu talagalay dadka haysta "Kaarka Cagaaran" markay ku noqdaan Talyaaniga tan iyo Oktoobar 2021.
Booqdayaasha Talyaaniga, kuwaas oo hadda ku gaari kara Seychelles iyada oo loo marayo COVID-19 marinnada dalxiiska ee bilaashka ah ee ay abaabulaan wakaaladaha safarka iyo hawl-wadeennada dalxiiska, hadda waa inay soo bandhigaan natiijada baaritaanka PCR-da xun ee la qaatay 48 saacadood ka hor soo laabashadooda.
Soo bandhigida horumarka cusub ee Seychelles ee ku saabsan helitaanka alaabada la soo bandhigay, Mrs. Willemin waxay iftiimisay furitaanka tiro guryo cusub ah iyo dayactirka kuwa kale si ay ugu raaxaystaan ​​​​booqdaha, iyo inay u oggolaadaan inay buuxiyaan shuruudaha iyo miisaaniyadaha kala duwan.
Horumarka xiisaha leh ayaa ku jira shaqada, Mrs. Willemin ayaa u sheegtay la-hawlgalayaasheeda, iyadoo daneeyayaasha Seychelles ay hadda ka shaqeynayaan soo jeedinno cusub si loo kala saaro badeecada; Kuwaas waxaa ka mid ah dalxiiska khibradda leh si loo keeno dadka soo booqda inay xiriir dhow la yeeshaan xaqiiqada deegaanka iyo horumarinta safarro waara.
Halka Seychelles ay sii wado diiwaan gelinta rikoorka togan ee tirooyinka imaatinka ee sanadkan, iyada oo in ka badan 39% ay kordheen marka la barbar dhigo isla muddadaas 2020; waa muhiim in la kordhiyo muuqaalka meesha loo socdo, gaar ahaan la-hawlgalayaasha ganacsiga, Mrs. Willemin ayaa sharraxday.
"Istaraatiijiyadeena Talyaaniga, sida suuqyada kale ee Yurub, waa inaan garaacno iyadoo birta ay weli kulul tahay. Xayiraadaha dhowaan ay qaaday dowladda Talyaanigu, waa waqti ku habboon inaan la hadalno la-hawlgalayaasheenna oo aan Seychelles ka dhigno meel caan ah. Hadafkayagu hadda waa in aan si tartiib tartiib ah dib ugu soo celino Talyaaniga oo ka mid ah suuqyada isha ugu sarreeya ee Seychelles maadaama uu hore u ahaan jiray masiibo" ayay tiri Mrs. Willemin. Si loo ogaado in Talyaanigu uu ahaa suuqa afaraad ee hogaaminaya isha dalxiiska sanadka 2019, markii 27,289 booqdayaal oo Talyaani ah ay doorteen inay fasax ku qaataan jasiiradaha Jannada Badweynta Hindiya.
Meesha ay doorbidayaan dadka Talyaaniga ah, Seychelles ayaa ugu sareysa liiska goobaha fasaxa ee la doonayo gaar ahaan xilliga kirismaska ​​​​iyo ciidaha jiilaalka. Maaddaama xilli-ciyaareedku soo dhawaado, kooxdu waxay xoojin doontaa istaraatiijiyadeeda suuq-geyneed ee suuqa Talyaaniga si ay u keento koror macquul ah tirada booqdayaasha Talyaaniga, Mrs. Willemin ayaa ku wargelisay ka qaybgalayaasha.
Iyaga oo muujinaya calaamado cajiib ah oo ku saabsan soo kabashada warshadeeda dalxiiska, Seychelles waxa ay diiwaangelisay 146 booqdayaal muddadii u dhaxaysay Janaayo 721 ilaa Noofambar 1 14 Seychelles sanadkan.